Misa Ukubhalela Izinjini Zokusesha | Martech Zone
Misa Ukubhalela Izinjini Zokusesha
NgoLwesithathu, ngoMashi 21, 2007 NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 Douglas Karr
Isifanekiso sami se-WordPress senzelwe izinjini zokusesha. Ngihleleke kahle ithempulethi yami ngifunde izeluleko ezimbalwa kubantu abambalwa. Konke kusuka ezihlokweni zamakhasi kuya kumathegi kuye kwenziwa kwasebenza ukuze kufinywe ngangokunokwenzeka kukho.
Ukwenza ngcono isifanekiso sebhulogi lami kuyasebenza - cishe ama-50% ezivakashi zami eza ngezinjini zokusesha, ikakhulukazi iGoogle. Yize ibhulogi yami yenzelwe izinjini zokusesha, SEO ochwepheshe bazobona ukuthi okuthunyelwe kwami ​​akunjalo.
Angisiphindi isihloko sami emishweni yami yokuqala embalwa. Angisebenzisi ithoni yezixhumanisi kokuthunyelwe kwami. Angijwayele ukuxhumanisa engikuthumele ngaphandle kwalapho kuhlobene ngempela. Ngemuva kokufunda ithani le- SEO izindatshana, ngingabhala uhlu lokuhlola lwezinto engi kufanele yenza ngokuthunyelwe ngakunye.
Ngeke ngikwenze ngoba angibhaleli ama-Search Engines, ngibhalela abafundi. Kubukeka sengathi akunangqondo ukushintsha isitayela sengxoxo yami ukuze uhlelo lokusebenza lwesoftware ethile kukhasi elithile lewebhu likwazi ukudonsa imininingwane yami futhi likhombe izindatshana zami ekuseshweni kwamagama angukhiye. Angikhathali noma ngabe injini yokusesha ingangithola kalula… Ngiyakukhathalela ukuthi umfundi ukujabulela engikuthumela kubhulogi.
Njengoba bengifunda lezi zindatshana isikhashana, ngiyabona impela lapho amanye ama-blogger ekwenza. Izwi nje lesixwayiso kulabo bhulogi - I yeqa ukufunda okuthunyelwe kwakho okuningi ngenxa yakho. Ngezikhathi ezithile, ngiyeke ngisho nokubhalisa.
Enye indlela yokutshela lawa ma-blogger ngabaphawuli bawo… ujwayele ukubona abahlaziyi abahlukahlukene isonto ngalinye uya kubhulogi labo. Azikho izingxoxo… ukuphawula nje lapha nalaphaya futhi abafundi abakaze babuye. Ngiyakujabulela kakhulu ukubona abantu abafanayo bebuyela kubhulogi lami kaninginingi. Ngikhule ngaba ngumngane wezivakashi zami eziningi - yize ngingakaze ngihlangane nazo mathupha.
Labo kini abanezizinda zokumaketha eziqondile bayazi ukuthi ucwaningo kunoma yiluphi uhlobo lukutshela ukuthi kunzima kakhulu ukuthola abafundi abasha kunokugcina okukhona. Kuyisu lokuzinqobisa lapho ubhala ukwakha ukubekwa kwe-Injini Yokusesha kepha abafundi bakho abakujabuleli noma ukunamathela kubhulogi yakho. Kufanele uqhubeke nokwenza ngcono futhi ugcine ukuguqula ukuze uthole ama-hits amaningi kusuka ku-Injini Zosesho.
Musa ukubhala izinjini zokusesha. Bhalela abafundi bakho.
Ukuntshontsha isiLithi kubadobi
Uthathe i-Blog Break!
Mar 22, 2007 ku-1: 02 AM
ngiyabonga ngokuhlolwa kwesan 🙂
kwesinye isikhathi ekuphokopheleni kwethu ukubekwa kubukeka sengathi siyakhohlwa ukuthi empeleni kukhona abafundi laphaya.
Mar 24, 2007 ku-9: 08 PM
Angihlali ngixhuma kokuthunyelwe yimi ngaphandle uma kuhlobene ngempela.
Cishe angikaze ngixhumane nokuthunyelwe kwami. Lokho kungenxa yokuthi isikhathi esiningi, engikuthumela kubonakala kungalandelani. Imvamisa basesihlokweni okwamanje, abanakho ukuxhumana (noma okuncane, uma kukhona) kokuthunyelwe kwangaphambilini.
Ngo-Apr 2, i-2007 ku-3: i-25 PM
Ngaqala ibhulogi futhi ngacabanga ukuthi nami ngangizoyenza leyonto, ngibhale ukuthola izinhlu zamakhasi nokunye okunjalo, lapho-ke lapho ngiqala ukubhala, kwaba sengathi akusimi ... Ngoba kwakungeyona! Ngibe sengithi uma ngizokwenza lokho bekuzoba ngokwemigomo yami hhayi abanye. Bengilokhu ngibhuloga inyanga kuphela futhi ngithanda iqiniso lokuthi ngakha ubudlelwano hhayi izixhumanisi!
Ngo-Apr 2, i-2007 ku-4: i-37 PM
Ngiyabonga, Latimer! Bengisanda kuphela kubhulogi yakho (ngicabanga ukuthi sinomngane esifana naye - u-JD ovela ku- Okumnyama Kwezebhizinisi. Ibhulogi yakho ibhalwe ngokucabangisisa… uthinta izihloko eziningi eziqhuma ngempela, kepha ngenhlonipho unikeza uhlangothi lwakho lwempikiswano bese ushiya isihloko sivuliwe ukuze kuxoxwe ngaso.
Ngifunde izindatshana eziningi ku-blogosphere ngalokho okwenzayo kufanele be ... futhi ngicabanga ngobuqotho ukuthi iningi liyi-BS Kufana nokutshela umuntu ukuthi bakwenza kanjani kufanele ube nengxoxo nomuntu ongamazi.
Siyabonga ngokuma ubeke amazwana!
Ngo-Apr 2, i-2007 ku-5: i-11 PM
Ngiyabonga ngokumiswa nguDoug, njengoba ngisho kubhulogi lami ngihlala ngivulekile ukuzwa yonke imibono futhi singaba nezingxoxo ezihlakaniphile nganoma iyiphi inkinga. Ngiyaphinda futhi ngiyabonga ngokuphawula.
Ngo-Apr 3, i-2007 ku-3: i-29 PM
Bengifuna ukukwazisa ukuthi ngikuthokozele kakhulu okushilo kulokhu okuthunyelwe. Ngisanda kuqala ibhulogi yami esikhathini esingaphezu kwenyanga edlule futhi ngifunda ngokuqinile ukuthi ungayenza kanjani le nto, ngakho-ke izeluleko zakho ziyasiza impela ngoba ziyiqiniso. Noma bengingakafiki kulokhu umzuzu, kuye kwadingeka ngilwe nesilingo sokwenza noma yini ukuze ngiqede ukubala. Kufana nokulutha kokuqhekeka noma okuthile, uyazi? ABAFUNDI abengeziwe, ngimane ngibe nabafundi ABANYE.
Kepha manje ngifunde okuthunyelwe kwakho futhi konke kubuyela kimi, njengalelo lizwi elincane elithunjiwe ngemuva kwengqondo yami. Ojeziswe ngokwenza umqondo. “Khuluma okwaziyo, ukusho njengoba usho, bazoza.”
Ngokuxolisa, kunjalo, ku- "Field of Dreams".
Ngo-Apr 3, i-2007 ku-5: i-08 PM
Ngiyabonga, Keith. Ngicabanga ukuthi wonke umuntu (ngisho nangaphandle kokubhuloga) ufuna ukuqashelwa. Ngibuye ngizithole ngibhala kwesinye isikhathi ngizibuza ukuthi izoyithinta kanjani i-SEO yami, izixhumanisi, ama-diggs, njll. Esinye sezizathu sokuthi ngibhale lokhu okuthunyelwe ukugcina Ngokwami emgqeni futhi!
Ngo-Apr 3, i-2007 ku-5: i-53 PM
Okuthunyelwe okuhle. Ngizama ukungazibhaleli izinjini zokusesha, kepha kufanele ngivume ukuthi ngicabanga ngakho. Kwezinye zezihloko zalokho engikuthumele (uma kuhlobene nomcimbi omkhulu), ngiqonde ukuthi kungathathwa yizinjini zokusesha. Angikwenzi lokhu ukuze ngibe nenani eliphakeme labavakashi besiza (nginezinye izindlela zokondla ukuzazisa kwami). Ngikwenza ngoba ngifuna abantu bafunde engikushoyo. Siyethemba bazobuya bazobamba iqhaza engxoxweni. Ukubhloga kumnandi. Ngihlangana nabantu abakhulu futhi ngifunde okuningi kunqubo.
Ngo-Apr 3, i-2007 ku-9: i-40 PM
Kholwa noma ungakukholwa, ungazibhalela izinjini zokusesha KANYE nabafundi bakho.
Ngithanda ukucabanga zombili / futhi esikhundleni se- / noma.
Ngo-Apr 3, i-2007 ku-9: i-59 PM
Noma yiliphi ithuba lokuthi ngingakuphonsela inselelo yokunikeza umbukiso onjalo? Angingabazi ukuthi akunakwenzeka - ngicabanga ukuthi mhlawumbe zikhona izindlela zokwenza zombili. Noma kunjalo, angikwazi ukubona noma yiziphi izibonelo. (Mhlawumbe kungenxa yokuthi umbhali wenze umsebenzi omuhle kangaka wokusebenzisa zombili izindlela.)
Ngingathanda ukubona okuthunyelwe okungahleliwe okubhalwe kahle futhi ukukuqhathanisa nokuthunyelwe okubhalwe kahle KANYE nokusebenzisa amasu wezinjini zokusesha.
Ngo-Apr 4, i-2007 ku-7: 49 AM
Sawubona Doug -
Engcupheni yokuzwakala ukuthi ngiyazihalalisela ngokuphelele, nansi ucezu engiludalile oluthola ithrafikhi enhle yenjini yokusesha futhi abafundi bami abajwayelekile abayithokozelayo:
Imithetho Yesongo Esingakhalazi: Ingabe unamathela kuzo?
Nginabambalwa abanjalo - kuNkulunkulu kuphela kube yinkazimulo!
Yize ngiyavuma ngiyazi ukuthi uqonde ukuthini - kwesinye isikhathi ngiye ngithande kakhulu i-SEO kunabafundi bami abajwayelekile, kepha ngiyajabula ukuthi abafundi bami abajwayelekile basalokhu bebuya ngoba bayangithanda.
Kufana nokuthi nginaye Ilker Yoldas 'TheThinkingBlog.com: Ngimane ngilokhu ngiyifunda ngoba ngiyayithanda, ukuze ikwazi ukubhala i-SEO futhi ngabe ngisaqhubeka ngikhona njengomfundi wayo ojwayelekile!
Nakekela futhi ubonge ngokuphendula,
Ngo-Apr 4, i-2007 ku-10: 10 AM
Ngiyabonga, Paula. Ngiyethemba, ukuthatha lokhu ngendlela efanele - kepha ngicabanga ukuthi usizile ukusekela umbono wami. Ukusho kwakho “isongo esingakhalazi” izikhathi eziningana ezigabeni ezimbalwa zokuqala akuzwakali njengeqiniso - kufundeka sengathi i-SEO bekuyiyona nto ebaluleke kakhulu kunokufana nokuthi ubukhuluma nami.
Okuthunyelwe kuhle kakhulu, ngicela ungangithathi ngendlela engafanele. Kepha eminyakeni emi-5 lapho izinjini zokusesha zingasabalalisa imininingwane yezindaba ngaphandle kwesidingo sokubabhalela - ngabe lokhu kungaba yindlela yemvelo yokubhala iposi?
Kuyindida ukuthi ngiye lokhu okuthunyelwe ku-Blog Yokucabanga kanti isigaba sokuqala sine 21 izixhumanisi ezingekho emthethweni zokuxhumanisa okujulile nebhulogi yakhe. Lezo zixhumanisi ngezenzelwe izinjini zokusesha, hhayi wena nami.
Ngo-Apr 4, i-2007 ku-10: 14 AM
Akukho cala elithathiwe; ngiyabonga ngokufunda okuthunyelwe kwami.
Futhi yebo, impela bengingeke phinda futhi ube nesibindi imisho ye-SEO uma bengingafuni ukuthi abantu babathole.
Maye, injalo impilo ye-SEO'er…
Ngiyazibuza ukuthi umdlalo wonke we-SEO-Google uzoshintsha kanjani ngokuzayo.
Kufanele kube ukuhamba okuhehayo…
Ngo-Apr 4, i-2007 ku-10: 23 AM
Hawu! Isondo elihamba kabili! Ngiyabonga Paula.
Jan 23, 2008 ngo-4: 20 PM
Vele ufunde lokhu okuthunyelwe nokuthi kufika ngesikhathi kanjani. Ngishiye umhlangano ngesonto eledlule lapho osebenza naye ephendula ngenkulumo ethi amawebhusayithi ethu awafundeki ngokusho ukuthi “lawa makhasi awenzelwe abafundi. La makhasi enzelwe izinjini zokusesha ”. Kwangenza ngaklwebha ikhanda lami ukuthi sase sifinyelele kude kangaka endleleni yokwenza kahle ukuthi othile ANYANELE ukuthi amakhasi angafundwa ngabantu. Ushaya ingqondo yami. Lungiselela ngangokunokwenzeka ngenkathi udala okuqukethwe okufundisayo kubonakala kungumqondo wangaphandle. Akunakusho ukuthi, ngithumele lokhu okuthunyelwe kubantu abambalwa enkampanini yami.